नीति बनाउने साँसद ज्यूहरुलाई सक्रृृय श्रमजिबि पत्रकारको निबेदन – Radio Miteree (Latest News)
अहिले देशका सातवटै प्रदेश सभामा धमाधम पुर्व बजेट छलफल भैरहेको छ । धेरै बिषयहरु छलफलमा उठिसकेका छन । तर ‘उज्यालो दिने बत्ती मुनीको अँध्यारो ’झै अवस्थामा रहेका हामी सक्रृय श्रमजिबि पत्रकाहरुको अबस्थाबारे कहिँ माननिय ज्यूहरु कसैले पनि केही बोल्नु भएको छैन । यसैले तपाई मान्य ज्यूहरुको ध्यान आर्कषित होस भनेर यो पत्र मार्फत केही निबेदनहरु गरिरहेको छु ।
सबैलाई थाहा छ ,— लोकतन्त्रको मुख्य गहना मानव अधिकारको सम्मान र बिचार र अभिव्यक्त्तिको स्वतन्त्रता हो । शुसासन हो । तर यो तव सम्म सफल हुदैन जवसम्म देशमा पत्रकारिता , खँदिलो र गर्बीलो हुदैन । जव देशमा सक्रृय पत्रकाहरु आर्थिक र भौतिक रुपले असुरक्षित रहिरन्छन तवसम्म बिकास पनि पारदर्शी , जनअनुकल र शुसासन युक्त्त हुन सक्दैन । संबिधानमा लेखिएको मौलिक एक व्यवहारमा कार्यान्यन हुन पाउँदैन ।
मागि र ठगी खान सक्नेहरुकालागि मिडिया क्षेत्र फलिफाप भएपनि आफनो नैतिक आचारसंहितामा बसेर पत्रकारिता गर्ने सक्रृय श्रमजिबि आर्दशवान पत्रकाहरुकालागि भने अझै जिबन निर्वाह समस्या छ ।
ख्याल गरौ हामी सबै कोही नेता , मन्त्री , ठूला कर्मचारी बन्न रुचायौ तर पत्रकार बन्न किन चाहेनौ । जबकी समाज परिवर्तनकालागि पत्रकार र पत्रकारिताको भूमिका अहं थियो र छ ।
हामी सबैले बाहिरी रुपमा पत्रकार र पत्रकारितलाई देखावटी सम्मान गर्ने गरेका छौ । राज्यको चौथो अंग बनाइदिएका छौ , तर भोक र अन्य शोकले थिलथिलो भएर चल्नै नसक्ने अंगका रुपमा थन्काइदिएका छौ । किनभने हामी सबै पत्रकार र पत्रकारितालाई काम हुन्जेल भाँडो र सकिएपछि ठाँडो झै ‘ युज एण्ड थ्रो’ गर्न चाहन्छौ ।
तँपाइलाई थाहा छ , हामी सक्रृय श्रमजिबि पत्रकाहरुको अबस्था ? धितो नभएको र तीर्न नसक्ने भन्दै पत्रकारलाई बैक र बित्तिय संस्थाहरुले पनि ऋण पत्याउँदैनन । सम्पत्ती भएर रहरले लागेकाहरुको हकमा त जेनतेन ठीकै होला । तर जीवन नै पत्रकारितामा होमेर सक्रृय समाचार खोज्ने लेख्ने काममा सक्रृय श्रमजिबि पत्रकारहरुको त अझै उपचार गराउने बेलामा चन्दा माग्नुपर्ने अबस्था कायमै छ । मजदुर र कर्मचारीहरुले योगदानमा आधारित निबृत्तीभरण सुबिधा पाउँछन । तर पत्रकारहरु जिल्लै छन । भन्नकालागि श्रमजिबि ऐन छ तर त्यो ‘हात्तीको देखाउने दाँत झै’को अबस्थामा छ । पुर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । खाइ—नखाई अर्काको समस्या देख्ने र लेख्ने पत्रकाहरु आफनो समस्याबारे निरिह बन्न बाध्य छन ।शोषणमा सहिरहेका छन । बिचरा ‘मरता क्या नही करता ’मा रहेकाहरु ।
नेपालमा तोकतन्त्र बहालीपछि मिडिया क्षेत्र फस्टाएको छ । तर त्यो केही कर्पोरेट हाउसका मालिक , ठेकेदारहरुलाई आफनो पकड बलियो बनाउन र कालो धनलाई सेतो बनाउन प्रयोग भैरहेको छ । मालिकहरु झन झन धनी भैरहेपनि उनिहरुको सँस्था भने झन झन गरिब भैरहेको देखाईन्छ र काम गर्ने पत्रकाहरुलाई तलब दिन आनाकानी गरिन्छ । अनि ती सँस्थामा काम गर्ने पत्रकाहरु अझै शैक्षिक मगन्ते बन्न बाध्य भैरहेका छन ।
नेपालमा पत्रकारिताको बर्गीय अवस्था पनि खतराखाले छ । एक खाले कार्पोरेट पत्रकारहरु आर्कषक तलब खान्छन तर उनिहरु आम सक्रृय पिडित श्रमजिबि पत्रकारिताको पक्षमा ‘चु’ सम्म बोल्दैनन । बरु हाकिम बनेर शासन गर्न रुचाउँछन र सक्रृय श्रमजिबिहरुलाई अदक्ष र असक्षम भनेर होच्याउदै आफुलाई उच्चो ठान्न गर्व गर्छन । उनिहरुले आफनो जीवन शानमय बनाएका छन । तर आफुजस्तै पिडित पत्रकारकाबारे वलकात गर्न रुचाउँछन । अनि अर्कोथरि पत्रकार छन । जो सधै राजनितिको वरिपरि घुमिरहन्छन र बिभिन्न सरकारी निकायमा पालौपालो सुबिधा खाइरहन रुचाउँछन । अनि केही पत्रकार छन जो आफनो दुनो सोझयाउनकालागि पत्रकारितामा छिरेका छन । पत्रकार बनेर पेशाको नैतिकता र आचारसंहिता समेत धरापमा पारेर भजाउने गरेका छन । उनिहरु जिम्मेवार र मर्यादित पत्रकारिताको कुनै अर्थ छैन । उनिहरु लामो समय पेशमा टिक्दा पनि टिक्दैनन । व्यपार , खराव राजनीति वा अन्य कुनै काम वा अपराध कर्मममा संलग्न हुन्छन । तर नैतिक जिम्मेवारी बोध गरेर , देशको संबिधान र काुननको संरक्षण गर्दै बिधिको शासन कायम गराउन , सक्रृय रुपले आफनो जीउ ज्यानको समेत ख्याल नगरि निरन्तर धेरै आर्दशवान पत्रकारहरु सक्रृय छन । तर उनिहरु अल्पमतमा छन ।उनिहरुको आवाज संगठित रुपमा झिनो छ । किनभने उनिहरु आवद्ध सँस्था पनि पुर्ण राजनैतिककरणले ग्रस्त छ । उनिहरु आवाज त उठाउँछन तर शक्त्ति मालिक र बिचौलिया पत्रकारहरुकै भएकोले पुर्ण श्रमजिबि मैत्री हुन सकेको छैन । यसैले उनिहरु अधिकार पाउनबाट बन्चित भैरहेका छन । अझै दास झै दया र मायामा बाच्न बिबश भैरहेका छन । प्रस्ट भैसकेको छ —मागि र ठगी खान सक्नेहरुकालागि मिडिया क्षेत्र फलिफाप भएपनि आफनो नैतिक आचारसंहितामा बसेर पत्रकारिता गर्ने सक्रृय श्रमजिबि आर्दशवान पत्रकाहरुकालागि भने अझै जिबन निर्वाह समस्या छ । यसैले कता कता नेपाली पत्रकारिता बिग्रेबिग्रेको जस्तो पनि देखिन थालेको छ । जसलाई माझिया र भ्रष्टचारीहरुले झन अनेक लोभ र प्रलोभनमा पारेर दुरुपयोग गर्न पाइरहेका छन । यसैले नेपाली मिडिया ‘आवाज बिहिनहरुको आवाज’ भन्दा पनि सभ्रान्तहरुको प्रचारकर्ता झै बन्न बाध्य भैरहेको छ । समाचारहरु (सिभिल)नागरिक ट्रेण्डबाट हैन कर्पोरेट ट्रेण्डबाट प्रकाशित प्रसारित भैरहेका छन । जनताका समस्याहरु ओझेलमा पर्न थालेका छन ।
हामीले बिरामी हुँदा राज्यको करोडौ खर्चेर बिदेशमा उपचार गराउन लगिदेउ भनेका छैनौ । हामीले राज्य कोष दोहन गरेर हामीलाई बिलासिताको सुबिधा दिनुपर्छ पनि भनेका होइनौ । हामीले नत हामीलाई सत्ताधारीहरुको झै मोटर , बंगला र भत्ता चाहियो भनेको हौ । मात्र हामीले त हामीले पनि देश र जनताको नागरिक हककालागि योगदान दिनकालागि हामीलाई पुर्ण सुरक्षित बतावरण तैयार गरिदेउ भनेका हौ । खलखली पसिना बगाएर टन्टनी दिमाग दुखाएर गरेको कामको उचित परिश्रमिक दिने व्यवस्था गरिदेउ मात्र भनेका हौ । मात्र हामीलाई बिचरा पत्रकार भौक परेछ , सिकिस्त बिमारले मर्ने लागेछ । बिचराको परिवार बिलखबन्दमा परेछ । उपचार गराउन नसकेर मानसिक रोगी भएछन । आत्महत्या गरेछ । आर्थिक अभावले परिवार बिखण्डन भएछ । आदि आदि बिचरा भन्ने अवस्थाको अन्त गराइदेउ भनेका हौ । किनभने यो राज्यमा परिवर्तन ल्याउन र सँस्थागत गर्न हामी श्रमजिबिहरुले पनि रगत पसिना बगाएका थियौ र बगाइरहने छौ ।
नझस्कनोहोस मान्यजीहरु ! हामी विकासकालागि भन्दै हजुरहरुले जस्तो राज्यबाट लाखौ करोडौ बिकास खर्च पनि माग्ने बाला छैनौ । हामीलाई हजुरहरुको जस्तो स्वकिय , पिए र अन्य अनेक भैपरि सुबिधाको आरिस पनि लाग्दैन ।
हामी त तँपाइहरुसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौ । देशमा नीति सही बनाउन र कार्यान्वयन गराउन । बिकासको सँगसँगै अनुगमन गर्न । भ्रष्टचारीलाई कार्बाही गराउन । हामी तँपाईहरुसँग ह्रदयमा ईमान्दारी , काँधमा जिम्मेवारी , बिचारमा साझेदारी र दिमागमा समझदारी लिएर सँगसँगै देशमा शुसासन कायम गराउन लागिपर्न चाहन्छौ । हाम्रो प्रस्ट बुझाई छ , तँपाइ मान्यजीहरु पनि बाच डग हो । नीति निर्माता हो । कार्यान्यवन गराउन परिचालक हो । राज्यलाई सहयोग गर्ने सारथी हो । ठीक हामी जस्तै ।
यसैले आशा छ मान्य ज्यूहरु तँपाइहरुले हाम्रो समस्यालाई बुझेर माथि उल्लेख गरिएका कुराहरु सदनमा सक्रृय रुपले उठाएर नीति बनाउन सहयोग गरिदिनु भयो यसको लाभ हामीलाई हैन सिँगो राष्ट्रलाई हुनेछ । आम नागरिकरलाई हुनेछ । यसैले हामी जस्तै सक्रृय श्रमजिबि पत्रकारहरुको समस्या र स्थानियत तहको पत्रकारिताको मर्मलाई आफुले भोगेको र जानेको अनुभव र क्षमता अनुसार एक नम्बर प्रदेशलाई पुर्ण पत्रकारिता मैत्री बनाउनकालागि केही सुझावहरु यही निबेदन पत्रसँगै उल्लेख गरेको छु । मान्यज्यूहरुलाई उचित लागेमा सदनमा कुरा उठाइदिनुहोला । नीति बनाउन सहयोग पुरयाइदिनु होला । बाँकी ईच्छा हजुरहरुको !